ကလေးအဖေ ဖြစ်သွားနိုင်မယ့် ခပ်တုံးတုံး အမှား ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
သင် ဘီယာ အလုံးပေါင်းများစွာ၊ Dinner များစွာကို ဖြတ်သန်းအပြီးမှာတော့ အဲဒီ အရမ်းလန်းတဲ့ ကောင်မလေးကို သင့်အတွက် စည်းရုံးနိုင်လိုက်ပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် အခန်းကိုပြန်ပြီး ဇာတ်လမ်းစဖို့ ကြံနေပါသလား။ ကွန်ဒွမ်ဆိုတာ ခံစားမှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
အကြံ မှားပါတယ်။ ခံစားမှုကိာ အနှောင့်အယှက် အဖြစ်ဆုံးကတော့ ကလေးထိန်းရတဲ့ ပထမ နှစ်ပါပဲ။ မိဘတစ်ယောက်ဟာ ကလေးတစ်ယောက် အတွက် ဒေါ်လာ တစ်သောင်းလောက် ထွက်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အကုန်အကျ မခံလိုဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောက်က အမှားစာရင်းတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် အကုန်သိပြီ မထင်ပါနဲ့။ တစ်ချက်မှားတာနဲ့ ကလေးအဖေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
၁. သင်က မတ်တပ်ရပ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံရင် ကလေးမရနိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
ယောက်ျား ငါးယောက်မှာ တစ်ယောက်က အဲဒီလို ယူဆထားတတ်ကြပါတယ်။ သင်သိထားဖို့က မြေဆွဲအားနိယာမကို လိင်ဆက်ဆံရာမှာ သုံးလို့ မရပါဘူး။
၂. တွေ့ကရာချောဆီကို သုံးပါတယ်
အရင်ဆုံး သင် သုံးမယ့်ချောဆီဟာ ဘာနဲ့ လုပ်ထားတာလဲဆိုတာကို အမြဲ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ အနှိပ်ဆီ၊ အသားလှဆီလိုမျိုး ရေနံ အခြေခံ အဆီတွေဟာ ကွမ်ဒွမ် အသားကို ရိစေပါတယ်။
၃. လက်တွေက ချွေးထွက်နေလို့ ကွမ်ဒွမ်ထုပ်ကို ကိုက်ဖောက်ပါတယ်
ဓားတွေ၊ ကတ်ကြေးတွေ၊ ပါးစပ်တွေ သုံးတာဟာ ကွမ်ဒွမ် မတော်တဆ ကွဲသွားဖို့ အခွင့်အလမ်း ၃ ဆပိုပါတယ်။ သင်နဲ့ ဖခင်ဘဝကြားမှာ ခြားထားတဲ့ တံတိုင်းပါးပါးလေးအနားကို ဓားတွေ ယူလာချင်ပါသလား?? သေချာစဉ်းစားပါ။
၄. ကွမ်ဒွမ်ထိပ်မှာ နေရာမချန်ပါဘူး
ရေပိုက်တစ်ခုကို လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ပြီး အရှိန်ပြည့် ဖွင့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုနေပါသလဲ?? သင့်ကွမ်ဒွမ်ကိုလဲ ထိပ်ပိုင်းမှာ လက်မဝက်လောက် နေရာ ချန်ထားပါ။ မဟုတ်ရင် ပေါက်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။
၅. သူမ တားဆေးစားထားလို့ ကွမ်ဒွမ် မသုံးပါဘူး
ူသင့်ရည်းစားဆိုရင်တော့ ယုံရပေမယ့် တညတာ အဖော်ဆိုရင် သင် ယုံမှာပါလား။ တားဆေးတွေဟာ ၉၀ ကနေ ၉၉ ရာနှုန်းထိ ကိုယ်ဝန်မရအောင် တားပေးနိုင်ပေမယ့် ကွမ်ဒွမ်နဲ့ တွဲသုံးရင်တော့ လုံးဝနီးပါး ကလေးမရနိုင်ပါဘူး။ သင့်သဘောပါ။
၆. အနားနီးမှ ကွမ်ဒွမ် ရှာမရတာနဲ့ အားနာလို့ ဒီတိုင်းပဲ လုပ်လိုက်ပါတယ်
သင် တော်တော် မျက်နှာပူရမယ့် အချိန်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးမယူနိုင်သေးခင် အဖေ ဖြစ်လာတာလောက်တော့ မဆိုးသေးပါဘူး။ ထပြီး နည်းနည်းကြိုးစား ရှာပါ။ မရှိရင် အနီးဆုံး စတိုးဆိုင် သွားဝယ်ပါ။
၇. သင့်ကွမ်ဒွမ်ကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ဖြစ်သလိုဆောင်ထားပါတယ်
ပြင်းထန်တဲ့ အပူ၊ အအေးဟာ ကွမ်ဒွမ်မှာပါတဲ့ အဆီကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အေးပြီး မှောင်ပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားပါ။ ဒါမှမဟုတ် မာတဲ့ Case တစ်ခုခုနဲ့ ထည့်ထားပါ။
၈. ကွမ်ဒွမ်ထဲမှာ ချောဆီ မထည့်ပါဘူး
သင် လုပ်ဆောင်တော့မယ့် ကြာရှည်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံပွဲကြီးဟာ ကွမ်ဒွမ်ကို ပြဲသွားစေနိုင်လောက်ပါတယ်။ ကွမ်ဒွမ်ထဲမှာ ချောဆီ ထည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြဲခြင်းမှ ကာကွယ်တဲ့အပြင် ပိုပြီးလဲ ကောင်းကောင်း ခံစားရစေပါတယ်။
၉. လိင်ကိစ္စမပြီးခင် ကွမ်ဒွမ် ချွတ်ပါတယ်
အဲဒါဆို မသုံးတာနဲ့ ဘာမှမထူးတော့ပါဘူး။ ကွမ်ဒွမ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ရခြင်းမှ ၉၈ ရာနှုန်း ကာကွယ်ပေးနိုင်တာမို့ စနစ်တကျ သုံးလိုက်ပါ။ ချွတ်ရင်လဲ အရင်းက ကိုင်ပြီး ချွတ်ပါ။ မဟုတ်ရင် ဖိတ်ကျနိုင်ပါတယ်။
၁၀. ကွမ်ဒွမ်မလိုပါဘူး ဆွဲထုတ်တာ ကျွမ်းပါတယ်
သင် အချိန်မီ ဆွဲထုတ်နိုင်ရင်တောင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသေးတယ်။ သင့်ရဲ့ သုတ်မတိုင်မီ ထွက်တဲ့ အကြည်ရည်ဟာ သင့်ရဲ့ နောက်ဆုံး ဆက်ဆံစဉ်က သုတ်ပိုးတွေကို သယ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ပါတယ်။ ဆက်ဆံမှု တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားတိုင်း ဆီးသွားတာ ကောင်းပေမယ့် အကောင်းဆုံးကတော့ ကွမ်ဒွမ်ပါပဲ။
ကလေးအဖေ ဖွဈသှားနိုငျမယျ့ ခပျတုံးတုံး အမှား ၁၀ ခု
သငျ ဘီယာ အလုံးပေါငျးမြားစှာ၊ Dinner မြားစှာကို ဖွတျသနျးအပွီးမှာတော့ အဲဒီ အရမျးလနျးတဲ့ ကောငျမလေးကို သငျ့အတှကျ စညျးရုံးနိုငျလိုကျပါပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ အခနျးကိုပွနျပွီး ဇာတျလမျးစဖို့ ကွံနပေါသလား။ ကှနျဒှမျဆိုတာ ခံစားမှုကို အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈတယျ။ ဟုတျတယျမဟုတျလား။
အကွံ မှားပါတယျ။ ခံစားမှုကိာ အနှောငျ့အယှကျ အဖွဈဆုံးကတော့ ကလေးထိနျးရတဲ့ ပထမ နှဈပါပဲ။ မိဘတဈယောကျဟာ ကလေးတဈယောကျ အတှကျ ဒျေါလာ တဈသောငျးလောကျ ထှကျနိုငျပါတယျ။
အဲဒီတော့ အကုနျအကြ မခံလိုဘူးဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အောကျက အမှားစာရငျးတှကေို ဖတျကွညျ့လိုကျပါ။ သငျ့ကိုယျသငျ အကုနျသိပွီ မထငျပါနဲ့။ တဈခကျြမှားတာနဲ့ ကလေးအဖေ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
၁. သငျက မတျတပျရပျပွီး လိငျဆကျဆံရငျ ကလေးမရနိုငျဘူးလို့ ထငျပါတယျ
ယောကျြား ငါးယောကျမှာ တဈယောကျက အဲဒီလို ယူဆထားတတျကွပါတယျ။ သငျသိထားဖို့က မွဆှေဲအားနိယာမကို လိငျဆကျဆံရာမှာ သုံးလို့ မရပါဘူး။
၂. တှကေ့ရာခြောဆီကို သုံးပါတယျ
အရငျဆုံး သငျ သုံးမယျ့ခြောဆီဟာ ဘာနဲ့ လုပျထားတာလဲဆိုတာကို အမွဲ စဈဆေးကွညျ့ပါ။ အနှိပျဆီ၊ အသားလှဆီလိုမြိုး ရနေံ အခွခေံ အဆီတှဟော ကှမျဒှမျ အသားကို ရိစပေါတယျ။
၃. လကျတှကေ ခြှေးထှကျနလေို့ ကှမျဒှမျထုပျကို ကိုကျဖောကျပါတယျ
ဓားတှေ၊ ကတျကွေးတှေ၊ ပါးစပျတှေ သုံးတာဟာ ကှမျဒှမျ မတျောတဆ ကှဲသှားဖို့ အခှငျ့အလမျး ၃ ဆပိုပါတယျ။ သငျနဲ့ ဖခငျဘဝကွားမှာ ခွားထားတဲ့ တံတိုငျးပါးပါးလေးအနားကို ဓားတှေ ယူလာခငျြပါသလား?? သခြောစဉျးစားပါ။
၄. ကှမျဒှမျထိပျမှာ နရောမခနျြပါဘူး
ရပေိုကျတဈခုကို လကျနဲ့ အုပျကိုငျပွီး အရှိနျပွညျ့ ဖှငျ့လိုကျရငျ ဘယျလိုနပေါသလဲ?? သငျ့ကှမျဒှမျကိုလဲ ထိပျပိုငျးမှာ လကျမဝကျလောကျ နရော ခနျြထားပါ။ မဟုတျရငျ ပေါကျထှကျသှားနိုငျပါတယျ။
၅. သူမ တားဆေးစားထားလို့ ကှမျဒှမျ မသုံးပါဘူး
ူသငျ့ရညျးစားဆိုရငျတော့ ယုံရပမေယျ့ တညတာ အဖျောဆိုရငျ သငျ ယုံမှာပါလား။ တားဆေးတှဟော ၉၀ ကနေ ၉၉ ရာနှုနျးထိ ကိုယျဝနျမရအောငျ တားပေးနိုငျပမေယျ့ ကှမျဒှမျနဲ့ တှဲသုံးရငျတော့ လုံးဝနီးပါး ကလေးမရနိုငျပါဘူး။ သငျ့သဘောပါ။
၆. အနားနီးမှ ကှမျဒှမျ ရှာမရတာနဲ့ အားနာလို့ ဒီတိုငျးပဲ လုပျလိုကျပါတယျ
သငျ တျောတျော မကျြနှာပူရမယျ့ အခြိနျဆိုတာ နားလညျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကလေးမယူနိုငျသေးခငျ အဖေ ဖွဈလာတာလောကျတော့ မဆိုးသေးပါဘူး။ ထပွီး နညျးနညျးကွိုးစား ရှာပါ။ မရှိရငျ အနီးဆုံး စတိုးဆိုငျ သှားဝယျပါ။
၇. သငျ့ကှမျဒှမျကို ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ ဖွဈသလိုဆောငျထားပါတယျ
ပွငျးထနျတဲ့ အပူ၊ အအေးဟာ ကှမျဒှမျမှာပါတဲ့ အဆီကို ပကျြစီးစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အေးပွီး မှောငျပွီး ခွောကျသှတေဲ့ နရောတှမှော ထားပါ။ ဒါမှမဟုတျ မာတဲ့ Case တဈခုခုနဲ့ ထညျ့ထားပါ။
၈. ကှမျဒှမျထဲမှာ ခြောဆီ မထညျ့ပါဘူး
သငျ လုပျဆောငျတော့မယျ့ ကွာရှညျတဲ့ လိငျဆကျဆံပှဲကွီးဟာ ကှမျဒှမျကို ပွဲသှားစနေိုငျလောကျပါတယျ။ ကှမျဒှမျထဲမှာ ခြောဆီ ထညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ပွဲခွငျးမှ ကာကှယျတဲ့အပွငျ ပိုပွီးလဲ ကောငျးကောငျး ခံစားရစပေါတယျ။
၉. လိငျကိစ်စမပွီးခငျ ကှမျဒှမျ ခြှတျပါတယျ
အဲဒါဆို မသုံးတာနဲ့ ဘာမှမထူးတော့ပါဘူး။ ကှမျဒှမျဟာ ကိုယျဝနျရခွငျးမှ ၉၈ ရာနှုနျး ကာကှယျပေးနိုငျတာမို့ စနဈတကြ သုံးလိုကျပါ။ ခြှတျရငျလဲ အရငျးက ကိုငျပွီး ခြှတျပါ။ မဟုတျရငျ ဖိတျကနြိုငျပါတယျ။
၁၀. ကှမျဒှမျမလိုပါဘူး ဆှဲထုတျတာ ကြှမျးပါတယျ
သငျ အခြိနျမီ ဆှဲထုတျနိုငျရငျတောငျ ကိုယျဝနျရနိုငျပါသေးတယျ။ သငျ့ရဲ့ သုတျမတိုငျမီ ထှကျတဲ့ အကွညျရညျဟာ သငျ့ရဲ့ နောကျဆုံး ဆကျဆံစဉျက သုတျပိုးတှကေို သယျပွီး ကိုယျဝနျရသှားနိုငျပါတယျ။ ဆကျဆံမှု တဈခုနဲ့ တဈခုကွားတိုငျး ဆီးသှားတာ ကောငျးပမေယျ့ အကောငျးဆုံးကတော့ ကှမျဒှမျပါပဲ။
Previous: မှားယွင်းတဲ့ ကွမ်ဒွမ်သုံးပုံနည်းလမ်း ၁၅ ခု
Next: ပြင်သစ်စကားသင်ယူသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း(၈)ခု